Mapisarema 115 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mwari chete ndiye anofanira kupiwa rukudzo
Zvidhori zvisina upenyu (4-8)
Nyika yakapiwa vanhu (16)
“Vakafa havarumbidzi Jah” (17)
115 Kwete kwatiri, haiwa Jehovha, kwete kwatiri,*Asi rukudzo ngaruuye kuzita renyu+Nekuda kwerudo rwenyu rusingachinji uye kutendeka kwenyu.+ 2 Nei marudzi achifanira kuti: “Mwari wavo ari kupi?”+ 3 Mwari wedu ari kumatenga;Anoita zvese zvaanoda. 4 Zvidhori zvavo isirivha negoridhe,Basa remaoko emunhu.+ 5 Zvine muromo, asi hazvitauri;+Zvine maziso, asi hazvioni; 6 Zvine nzeve, asi hazvinzwi;Zvine mhino, asi hazvinhuhwidzi; 7 Zvine maoko, asi hazvibati;Zvine tsoka, asi hazvifambi;+Pahuro pazvo hapabudisi inzwi.+ 8 Vanhu vanozvigadzira vachafanana nazvo,+Uye ndizvo zvichaitawo vese vanovimba nazvo.+ 9 Haiwa iwe Israeri, vimba naJehovha,+Ndiye mubatsiri wavo nenhoo yavo.+ 10 Haiwa imi imba yaAroni,+ vimbai naJehovha,Ndiye mubatsiri wavo nenhoo yavo. 11 Imi vanotya Jehovha, vimbai naJehovha,+Ndiye mubatsiri wavo nenhoo yavo.+ 12 Jehovha anotiyeuka uye achakomborera;Achakomborera imba yaIsraeri;+Achakomborera imba yaAroni. 13 Achakomborera vaya vanotya Jehovha,Vadiki pamwe chete nevakuru. 14 Jehovha achaita kuti muwedzere,Imi nevana* venyu.+ 15 Jehovha ngaakukomborerei,+Muiti wedenga nenyika.+ 16 Kana ari matenga, ndeaJehovha,+Asi nyika akaipa vanakomana vevanhu.+ 17 Vakafa havarumbidzi Jah;+Kunyange vaya vanodzika kurunyararo.*+ 18 Asi ticharumbidza JahKubva zvino zvichienda mberi uye nekusingaperi. Rumbidzai Jah!*
^ Kana kuti “Isu hatina chatiinacho, haiwa Jehovha, isu hatina chatiinacho.”
^ Kureva, kurunyararo rwerufu.